१२ कक्षा पास गरेपछि सृष्टीलाई जब हिमाल चढ्ने रहर जाग्यो...
२० श्रावण २०७६, सोमबार ११:१४
१२ कक्षा पास भएपछि के पढ्ने भन्ने दोधारमा थिएँ । लाखौं खर्च गरेर अष्ट्रेलिया गएर ४ बर्षमा सकिने Bachelorलाई १० बर्ष लगाउन पनि मन लागेन । हरेक दिन विभिन्न कलेजको आकर्षक विज्ञापनले पनि मन तानेन । केही कलेजमा घुमेँ । पैसा खर्च गरेर पढ्नु छ, तर भविष्यको टुङ्गो छैन । कलेज ५ स्टार होटेल जस्ता छन्, पढाई कस्तो हुने थाहा छैन । मलाई पढ्नु थियो, केही बन्नु थियो । सबैभन्दा ठूलो कुरा अरुभन्दा फरक हुनु थियो ।
नेपाल सुहाउँदो पढाई भनेको पर्यटन नै हो । हामीले हाम्रा हिमालको फोटो खिच्न मात्र जान्यौं भन्ने लाग्यो । तर होइन रहेछ, यस्को पढाई पनि सुरु भइसकेछ । संसारमै पहिलो पटक नेपालमा Bachelor in Mountaineering Studiesको पढाई हुँदो रहेछ त्यो पनि नेपालको सबैभन्दा उत्कृष्ट विश्वविद्यालय TU सँग affiliated भएको । कलेजले 3rd Batchको लागि Admissionखोलिसकेको रहेछ ।
बिजुलीबजार, काठमाडौंमा रहेको कलेज भिजिट गरेँ । विश्वमै एकमात्र ठाउँमा पढाई हुने कोर्षको बारेमा बुझेँ । Bachelor पढ्दा पढ्दै हिमाल चढिने रहेछ । हिमालको अध्ययन त्यही पनि नेपालमै । फेरि एकदमै सस्तो । पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको Nepal Mountain Academy को विशाल लक्ष्य देखे । Mountain University बन्दै रहेछ । आज मात्र होइन, भोलिका लागि पनि BMS को संभावना नै संभावना देखेँ ।
Science, Management, Education जुनसुकै पढेकाले पनि पाइने । एक व्याचमा जम्मा ३० जना मात्र लिने । कति रमाइलो ।हरेक सेमेष्टरमा फिल्ड, त्यही पनि हिमालहरुमा । 4th, 7th र 8th Semester मा त हिमाल नै चढ्न पाइने । अनि 3rd मा चै बेसक्याम्पसम्म ट्रेकिङ्ग । आहा !
करियरका हिसाबले त झन् कहाँ हो कहाँ ।३००० भन्दा बढी ट्रेकिङ एजेन्सी, ५००० भन्दा बढी ट्राभल एजेन्सी, टुर अपरेटर, हेलिकप्टर कम्पनी लगायत सबतिर हाम्रै नेपालमा ! तर पढेको जनशक्तिको अझै अभाव । आइडिया Creator को खाँचो रहेछ देशमा । एउटा Leader बन्ने मौका गुमाउन मन लागेन मलाई । एउटा हिमाल मात्र चढेको मान्छेको त विश्वमै ढोका खुल्ला हुन्छ भने हिमाल पढेर हिमाल चढेकै मान्छेको लागि जहाँ पनि बाटो खुला हुने नै भयो । त्यसैले मैले चाहि BMS नै रोजेँ । तिमीहरु पनि के पढ्ने भनेर दोधारमा छौं भने 5244888, 5244277 मा फोन गरेर पढ्न आउ है । थप जानकारी कमेन्टमा छ !
– सृष्टी नेपाल, कपन, काठमाडौं